Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165639 times)
« Reply #160 on: May 27, 2011, 11:36:19 AM »
သိတဲ့ သူ ရှိ သ လို မ သိ သူ များ လည်း ဖြေ လို့ ရ အောင် ပါ အ ပျင်း ပြေ ပေါ့  ။ ကျွှန် တော် တို့ ဇာ တ် လိုက် ကြီး ကို ကျော် သူ ကို အ မှတ် တ ရ ပေါ့
၂။ကျော်သူနဲ့စိုးသူပါဝင်ပြီး အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုနဲ့ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရဇာတ်ကား×××
၅။ဒါလည်း အကယ်ဒမီရမယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ကားပါ။ဒါပေမယ့် မရပါဘူး။မင်းသမီးရသွားတယ်။
၆။ဒီကားမှာလည်း အကယ်ဒမီလို့ပြောကြတာပေါ့။ဒါပေမယ့် ဇာတ်ပို့ဆုကို တွဲဖက်ပါဝင်တဲ့မင်းသားကရသွားတယ်။
၇။ကျော်သူနှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်ကတဲ့ ရုပ်မြင်ဇာတ်လမ်း။အဲဒီဇာတ်ကားထဲကနာမည်တောင်တွင်အောင် သရုပ်ဆောင်ပြောင်မြောက်ပါရဲ့။
၉။ဒီရုပ်ရှင်ကလည်း ကားဟောင်းကိုပြန်ရိုက်တာပါ။ထူးခြားတာက တပြိုင်နက်တည်း ဗီဒီယိုလည်းရိုက်ခဲ့တယ်။တပ်ထူးခြားတာကပရိုဂျူဆာမတူ ၊ဒါရိုက်တာမတူ။မင်းသားကတော့ ၂ခုစလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ကိုကျော်သူ။ပိုပြီးထူးခြားတာကရုပ်ရှင်ကားကြီးကမင်းသမီးနဲ့ ဗီဒီယိုကားက ဇာတ်ပို့မင်းသားကကွာရှင်းထားတဲ့ သူတွေ။နောက်ထပ် ထပ်ထူးခြားတာက ဇာတ်ပို့မင်းသမီးကရုပ်ရှင်မှာရော ဗီဒီယိုမှာသူလည်း ကျော်သူလိုပဲ ၂ကားစလုံးမှာပါတယ်။ထပ်ထပ်ပြီးထူးတာက ဒီရုပ်ရှင်၊ဒီဗီဒီယိုရဲ့မူရင်းဝတ္ထုကနာမည်ကြီးကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အခြေခံပြီးရေးခဲ့တာပါ။ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးထူးခြားတာက..........
၁၀။ကျော်သူ တကယ် အကယ်ဒမီရသွားတဲ့ကား
စော် ကြည် တဲ့ ဂေါ် လီ ဘဲ
« Reply #161 on: May 27, 2011, 11:51:00 AM »
ကဲကဲ ဒါက ဗရုတ် သုတ် ခ လေး ပါ အဲ မှား လို့ ဗဟုသုတ လေးတွေ ပါ
၁။ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံးမြစ်(၁။နိုင်းမြစ် ၂။ မစ္စစပီမြစ် ၃။သံလွင်မြစ်)
၂။ကမ္ဘာပေါ်မှာ အအေးဆုံးနေရာ(၁။ဧ၀ရက်တောင် ၂။ဆိုက်ဗေးရီယား ၃။ အန္တာတိကတိုက်)
၃။ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းကြီးသည်(၁။မော်စကို ၂။လန်ဒန် ၃။ မင်းကွန်း)တွင်ရှိသည်။
၄။မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကျွန်းသစ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၏(၁။၃ပုံ၁ပုံ ၂။၂ပုံ၁ပုံ ၃။၄ပုံ၁ပုံ)ခန့်ကို ထုတ်လုပ်နေသည်။
၅။ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးကျွန်းအမည်မှာ (၁။ဂရင်းလန်ကျွန်း ၂။စစ္စလီကျွန်း ၃။ သီဟိုဠ်ကျွန်း)
၆။ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရာဘာ (ရော်ဘာ )*စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံ(၁။မလေးရှား ၂။ အင်ဒိုနီးရှား)
၇။ကော်ဖီအများဆုံးထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ(၁။ဘရာဇီး ၂။အာဂျင်တီးနား ၃။ပါရာဂွေး**)
၈။ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးမှာ(၁။ အမေရိကန် ၂။တရုတ် ၃။မြန်မာ)ပြည်တွင် ရှိသည်။
စော် ကြည် တဲ့ ဂေါ် လီ ဘဲ
« Reply #162 on: May 27, 2011, 12:00:22 PM »
ဒီတစ်ခါတော့ မပျင်းရအောင် သီချင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်တွဲမေးပါမည်။အဖြေမှန် တစ်ခုပဲရွေးပေးပါ။
၁။ရုပ်ရှင်မင်းသားအဆိုတော်ထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်တီးဝိုင်းတစ်ခု ထောင်ဖူးတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသား။(၁)ရန်အောင်(၂)ဒွေး(၃)စိုးသူ
၂။မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာ မိန်းကလေးသရုပ်ဆောင်တွေပဲပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရှိပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်အမည်က မေတ္တာစိမ်းစိမ်း။ဒီကားရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး
၃။ဒီနေ့ပိတောက်ပန်းတွေပွင့်တယ်။ငယ်ငယ်ကကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကိုသတိရတယ်။ပိတောက်မြိုင်တဲ့။အေ၀မ်းတင်တင်လှရဲ့ နေ့စဉ်ပိတောက်ပွင့်ပါစေ သီချင်းပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပေါ့။ဒီဇာတ်ကားမှာ(၁)ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း+ဒေစီကျော်ဝင်း(၂)၀င်းဦး+ခင်သန်းနု (၃)ညွန့်ဝင်း+၀ါဝါ၀င်းရွှေတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၄။ ကျော်ဟိန်းရဲ့ ရေဒီယို ဓာတ်ပြားရသီချင်းအမည်(၁)စိမ်းသရဖူစိမ်း(၂)စိမ်းမြမြစိမ်း(၃)စိမ်းတယ်လို့မှတ်မှာလား
၆။အတွယ်အတာဇာတ်ကားမှာ ၀င်းဦးနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်အမည်(၁)မိုးမမမျိုး(၂)စန္ဒာလင်း(၃)၀င်းမော်နီ
၇။The Purple Plainဆိုတဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အမည်(၁)၀င်းမြင့်သန်း(၂)၀င်းဝင်းသန်း(၃)၀င်းမင်းသန်း
၈။မြန်မာပြည်ကို အလည်လာဖူးတဲ့ Rock Star(1)Steven Tyler (2)Mick Jagger(3)John Bon Jovi
၉။ချမ်းချမ်းရဲ့ ယုံကြည်သောအချစ်(I believed myself)သီချင်းရဲ့ မူရင်းသီချင်းသည်(1)English(2)Korea (3)Japan သီချင်းဖြစ်သည်။
၁၀။နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သီကုံးစပ်ဆိုခဲ့သူမှာ (၁)နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင် (၂)သဟာယဆရာတင်(၃)၀ိုင်အမ်ဘီသခင်တင် ဖြစ်သည်။
အပြင်းပြေကြပါစေ လို့ စုတောင်းပေးပါ တယ်
« Reply #163 on: May 27, 2011, 01:13:04 PM »
Quote from: gawlibell on May 27, 2011, 11:51:00 AM
#3 Moscow has the largest bell still in existence and Mingun has the largest functioning bell in the world,
#4 75% (3/4), (burma produces 75% of world's timber)
#6 Thailand, ( indonesia is 2nd and malaysia is 3rd in rubber production)
#7 Brazil is largest coffee bean producer and Jamaica's Blue Mountain coffee is one of the best coffee.
« Reply #164 on: May 27, 2011, 03:41:08 PM »
drlanmadawthar ရေ cheers ဗျာ အဖြေ တွေ ကို မှန် အောင် ဇြေ နိင် ရုံ မ က ဘူး အမှား ပါ ပြင် ပေး သွား တယ် anyway thz u ur ans dude
ပျော် ရွှင် နိုင် ကြ ပါ စေ
« Reply #165 on: May 31, 2011, 11:09:22 AM »
အဖြေတွေကိုဘယ်သူမှဖြေထားတာမတွေ့လို့ စိတ်မ၀င်စားကြဘူး ထင်ပါတယ် ။
အဖြေတွေကို ဖြေမဲ့သူ မ ရှိ၇င် post remove ကျွှန်တော်ပြန်လုပ် လိုက်ပါ မယ် ။
ကျွှန်တော် မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးတဲ့ drlanmadawthar ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
« Reply #166 on: May 31, 2011, 11:36:47 AM »
There isadish with three oranges. Suppose that you take two oranges from the dish. How many oranges do you have?
Compare the numbers 0.99999... (infinitely many 9s) and 1.Which of the following sentences is true?
1.0.99999... is less than 1
2.0.99999... is greater than 1
3.0.99999... is equal to 1
A certain farmer has 100 hens, numbered from 1 up to and including 100. Only the hens with the numbers 13 up to and including 48 each lay one egg. How many of the hens haven't laid an egg?
Our earth orbits around the sun. How long does one complete orbit of the earth around the sun take?
1.less than 365 1/4 days
2.exactly 365 1/4 days
3.more than 365 1/4 days
The earth not only orbits around the sun, but also spins round her axis. How long does one complete turn of the earth round her axis take?
1.less than 24 hours
2.exactly 24 hours
3.more than 24 hours
In our western calendar there are years of 365 days and leap years of 366 days. How often is italeap year in our calendar?
1.exactly once in every4years
2.more than once in every four years
3.less than once in every four years
The calendar that we use hasaname. What is the name of our western calendar?
The year is divided into four seasons: spring, summer, autumn and winter. On the northern hemisphere it is summer when it is winter on the southern hemisphere, and the other way around. Which of the following sentences is true?
1.The summer on the northern hemisphere is longer than the summer on the southern hemisphere
2.The summer on the northern hemisphere is shorter than the summer on the southern hemisphere
3.The summer on the northern hemisphere is as long as the summer on the southern hemisphere
Given the mathematical set N of natural numbers (0, 1, 2, 3, 4, 5, ...) and the set Z of integer numbers (..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...).
1.N has less numbers than Z
2.N has as many numbers as Z
3.N has more numbers than Z
As you know, the world population is growing very fast. The main cause is of course thatalot of babies are born.
How many babies are born every minute worldwide (approximately)?
5.more than 300
How many of the previous questions have you answered correctly?
ဖြေကြည့်ပါဦး။ဒီတစ်ခါတော့ မေးခွန်းအားလုံးပုံစံတကျမေးပေးထားပါတယ်။ဖြေတဲ့သူက (၁၁)ခုကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြေရပါမယ်။အဖြေမသိလည်းအဖြေတစ်ခုတော့ထည့်ပေးပါ။ရှင်းပြစရာမလိုပါ။အဖြေမှန်ကို
အရင်မေးခွန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူမရှိလို့ ထက်မေးထားတာပါ စိတ်ဝင်စားသူများအပြင်းပြေဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
« Reply #167 on: June 03, 2011, 07:08:08 PM »
Quote from: imail on March 27, 2011, 03:02:09 AM
ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တုန်းက ဂျာမန်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားကို မဟာမိတ်တပ်တွေလိုက်တယ်တဲ့
ကားက ကိုင်းတောကွင်းပြင်အကျယ်ကြီးကို ဖြတ်ပြေးပါတယ်
ကားက တစ်နာရီမိုင်နှစ်ဆယ်သာသွားပြီး လေကသုံးဆယ့်ငါးမိုင် တိုက်နေပါတယ်
ဒါနဲ့ မဟာမိတ်တပ်က ဆက်မလိုက်တော့ပဲ ကိုင်းတောကို မီးရှို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်
လေအရှိန်နဲ့ ကိုင်းတောကို မီးလောင်သွားလိုက်တာ သုံးဆယ့်ငါးမိုင်နှုန်းနီးပါးနဲ့ ကားနောက်ကို မီးက လိုက်ပါတယ်
ဂျာမန်ကားက ဘေးဘယ်ညာ ကွေ့ထွက်ဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး
မီးက ကားနောက်လိုက်လာလိုက်တာ တဖြေးဖြေးနဲ့ နီးလာပါတယ် ဆက်မောင်းနေရင် မလွတ်ပါဘူး
ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်ရဲ့ အကြံကြောင့် အဲ့ဒီကား မီးဘေးကလွတ်သွားပါတယ်
(ကားပေါ်ကရေတွေနဲ့ငြှိမ်းတာတို့ ၀ိုင်းပြီးသေးပေါက်တာတို့ မလုပ်ဘူးနော် )
လွယ်ပါတယ် ရှေ့က ကိုင်းတောတွေကို မီးရှို့လိုက်ပေါ့ ။ မီးလောက်နေတဲ့ကိုင်းတောတွေနောက်က အသာလေးလိုက်သွားလိုက်ရုံပဲလေ
ဒါဆို အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ ။ မီးလောက်ထားတဲ့ မြေကြီးပေါ်ဖြတ်ရတော့ နဲနဲတော့ပူမှာပေါ့ဗျာ
တားက ငယ်ကတည်းက ကလိလာတာပါဗျာ......
« Reply #168 on: June 05, 2011, 11:26:49 AM »
Quote from: thargyi12 on May 26, 2011, 01:51:23 PM
မေး ရ အုံး မယ် ဗျာ
ပေါင်းလို့ရပြီး နုတ်လို့မရ တာဘာ လဲ..............?
အဖြေမှန်က တော့ အသက် ပါ
« Reply #169 on: June 06, 2011, 08:46:26 PM »
It's >>>>>>> -3-
Quote from: gawlibell on May 31, 2011, 11:36:47 AM